50L Electric Brewhouse-Iindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
50L Indawo yokubasela umbane
Ixesha: 2020-12-02 I ngxelo: 40
Ngenxa yobhubhane, inkqubo ye-nano brew ithandwa ngakumbi nangakumbi phakathi kwabathandi botywala basekhaya. Ukuhlangabezana neemfuno zentengiso, i-COFF ityhala uthotho lweenkqubo zokupheka ekhaya. Ngoku masibazise nganye nganye.
Yenzelwe i-tun-lauter tun, iketile, i-CLT, i-3X50L yeYunithi
Iimpawu: I-skid-mount, iplagi kunye nokudlala, imbonakalo entle, iindleko-olusebenzayo, ukhetho olufanelekileyo lokupheka ekhaya;
Inkqubo yokubilisa ifakwe izixhobo zombane, i-basket ye-straining, i-RTD-PT100 i-tem-sensor, ityhubhu yenqanaba lamanzi, iipayipi ze-SUS kunye ne-valves, i-pump (i-VFD ngokuzikhethela), i-Heat exchanger kunye ne-aort device, ipaneli yokulawula.
Inkqubo yokubila ibandakanya: i-3x50L unitank, i-RTD-PT100 ye-tem-sensor, i-hops port, i-CIP, igeji yoxinzelelo, isampulu yevalve, ingalo yokurhabaxa, ukufunxa izibuko, i-valve yokhuseleko, intonga ye-carbonation kunye ne-SUS valves njl.
Uninzi lwezinto zokuthengisa utywala ziqala ishishini lazo kwiinkqubo ze-nano. I-COFF inikezelwe ekunikezeleni isisombululo esigqibeleleyo sokwakha kuyilo, ukuvelisa, ukufakela kwinkonzo yasemva kwexesha. Nge-COFF, uqinisekile ukonyusa ixabiso lakho.
Ngolwazi oluthe kratya, pls qhagamshelana jessie@nbcoff.com
Previous: I-1BBL ~ 3BBL ngqo kwiBrewhouse yoMlilo
Okulandelayo: Ukuhambisa kunye nokuhambisa ngenqanawa itanki yokuhambisa i6000L